Labiskii Michelle Obama ku tagtay Sacuudi Carabiya oo muran dhaliyey (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 January 2015 28 January 2015
Mareeg.com: Xaaska madaxweynaha dalka Mareykanka, Michelle Obama ayaa dood badan dhalisay kadib markii ay tagay Boqortiiyada Sacuudi Carabiya, iyadoo la socotay ninkeeda oo tacsi ugu tegay qoyska reer boqoqr ee dalkaas kadib geeridii Amiir Cabdalla Bin Cabdilcaziiz ee jimcihii tegay.
Dooda ayaa ka dhalatay iyadoo Michelle Obama aysan dhowrin dhaqanka Islaamka, waxeyna iyadoo timaheedu qaawan yihiin wax ka qaabishay boqorka cusub ee Sacuudiga Amiir Salaan Bin Cabdilcaziiz.
Dhaleeceynta baraha bulshada loogu jeediyey Michelle Obama kuma koobneyn oo kaliya timaheeda banaanka yaallay ee waxaa sidoo kale lagu dhaleeceeyey iney soo xiraty dhar aad u ifaya oo midabka buluugu ku badan yahay, iyadoo tacsiyada aan looga baran labiska ceynkaas ah.
Inkasoo dalka Sacuudiga laga ogolyahay in dumarka ajnabiga timahooda banaanka dhigan karaan, haddan dadka doodaan furay ayaa barbar dhigay booqashooyin Michelle Obama ku tagtay dalalka Indonesia, India iyo Italy, kuwaasoo dhamaan la sheegay iney ilaalisay dhaqankii meelahaas ka jiray.
Michelle Obama oo sanadkii 2010 booqatay dalka Indonesia ayaa xiratay dharka dhaqanka u ah, waxeyna xijaabatay madaxa iyadoo ilaalineysa dalkaas oo ah dal Islaam ah.
(Michelle Obama oo ku sugan Indonesia)
Sidoo kale markii ay sanadkii 2009 booqatay xarrunta Vatican-ka ee dalka Taliyaaniga ayay xiratay dharka dhaqanka u ah Kiristaanka ee la isla yaqaano.
(Michelle Obama oo ku sugan Vatican)
Booqashadii ay dhawaan ku tagtay dalka Hindiya iyadoo la socota seygeeda ayey dadka ku salaantay salaanta gaarka ah ee dalkaas “Local Indian greeting”.
(Michelle Obama oo ku sugan India)
Dad badan oo Sacuudiyaan ah iyo kuwa kale oo Muslimiin ah ayaa is weydiiyey sababta keentay in Michelle Obama iyadoo madax qaawan ay ku dhex socoto dhulka Xarameynka, xilli ay horay u xushmeysay diimo iyo dhaqamo kale.